Fanandramana mpamokatra | Xiamen Yasin Industrial and Trade Co., Ltd.
● Ny orinasanay dia tsy manana hery ara-teknika matanjaka, fitaovana tsara ary fitaovana fitiliana faran'izay avo lenta ihany fa fitantanana kilasy voalohany ihany koa.
● Satria ny teny filamatray dia ny hampiasa teknolojia vaovao hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, hanitarana ny tsenanay amin'ny kalitao avo indrindra ary hametraka ny trosantsika amin'ny alàlan'ny serivisy tsara, dia sahy manao fanavaozana izahay, manolo-tena amin'ny fanatsarana ny kalitao ary maniry hampivoatra ireo deratika gelatin.
● Amin'izao fotoana izao dia maherin'ny 8000 taonina ny gelatin sy collagen isan-taona no malaza any an-toerana ary miditra amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vokatra rehetra dia manaraka ny fenitra nasionaly sy ny fenitra indostrialy.
Ny orinasa dia mila traikefa, hiantohana ny kalitao tsara indrindra ary hanavao hatrany ny tsipika famokarana. Izany dia mety hahatonga ny mpamatsy gelatin hanana famoahana tsaratsara kokoa kokoa ary hitsitsy vola. Ny injenieran'ny traikefanay dia eo hanompo anao ny gelatin tsara indrindra amin'ny fampiharana anao.
Mba hilazana fa ny vokatra misy antsika manana kalitao dia tsy maintsy ataontsika ihany koa fa voafehy tsara ny fidiovana, ny fibaikoana ny bakteria, ny fizotrany. Ny vokatray dia manana ny indostrian'ny sakafo, ny faritry ny fanafody, ny indostrian'ny famenon-tarehy ary ny kosmetika sns izay mila fikarakarana avo lenta mba hahazoana antoka fa tsy hisy olana intsony amin'ny kalitaon'ny vokatra.
“Ny safidinao tsara indrindra, ny mpamatsy azo itokisana!” manome foana ny vokatray misy kalitao tsara miorina amin'ny vidin'ny fifaninanana, fandefasana haingana, serivisy tena tsara ary nankafy ny lazan'ireo mpanjifa.